Translator Newsletter: Fiteny roa, fandikana hainteny sy ny hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2019 18:03 GMT
Araka ny voalazan'ity lahatsoratra ity ao amin'ny Terminology Coordination, ireo olona izay mahay fiteny roa no tsara kokoa amin'ny fanaovana asa maro, fifantohana sy fitadidiana laharan-tarehimarika, sy mitazom-baovao! Ankoatra izany, dia mety hanampy anao hisoroka ny hadalana any aoriana any. Jereo ny lahatsoratra sy ny lahatsary ao amin'ny rohy mba hahafantarana bebe kokoa!
Manomboka andiana tafatafa amin'ireo matihanina momba ny fiteny ny ALTA ary natombok'izy ireo tamin'ny Dr. Farooq Kperogi, profesora sy mpanao gazety avy ao Nizeria izany, izay mifantoka amin'ny karazana Anglisy eran'izao tontolo izao. Anatin'ity tafatafa ity i Kperogi miresaka momba izay nahatonga azy ho ao amin'ny sehatry ny fiteny, ho tonga amin'ny tetikasany amin'izao fotoana izao, ary ny zavatra nantsoiny hoe “Glocal English”. Vakio ato ny resadresaka feno!
Tsindrio ato raha te-hahafantatra bebe kokoa ary lazao anay raha mihatra amin'ny traikefa niainanao tamin'ny fandikan-teny amin'ny fiteninao manokana izany.
Vao haingana i Corinne McKay, henjana noho ny henjana amin'ny fampianarana ho an'ireo mpandika teny mahaleo tena sy tolo-kevitra momba ny fandikan-teny ho an'ireo izay manomboka ho amin'izany, no nanoratra fa mety ho fanampiana lehibe ny fomba ahafahana manana mpiara-miasa amin'ny fandikan-teninao. Vakio ato bebe kokoa ary raha manao asa mahaleotena ianao, dia lazao anay hoe – miara-miasa amin'ny olona ve ianao?